1500နဲ့ 528 အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » 1500နဲ့ 528 အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲ။
1500နဲ့ 528 အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲ။
Posted by mr.dark blood on Aug 6, 2010 in Arts & Humanities, Community & Society, Cultures, Drama, Essays.., Entertainment, Literature/Books, Relationships & Family, Science & Religion, Think Tank |6comments
လူတွေ ပြောပြောနေကြတဲ့ ၁၅၀၀အချစ်၊၅၂၈အချစ်လို့ ပြောပြောနေကြတာ၊ရေးရေးနေကြတာ
မြင်နေကြားနေရပါတယ်။တချို့က သိပေမယ့် တချို့ကတော့ မသိကြပါဘူး။
သိတဲ့သူတစ်ချို့ကျတော့လည်း အကျယ်ကို ဖော်ပြခြင်း မရှိကြပါဘူး။
ဒါကြောင့် အကျယ်ကို သိရအောင် ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
အနောဓိသပုဂ္ဂိုလ်(မရည်ညွှန်းအပ်သော) (၅)ယောက်၊သြဓိသပုဂ္ဂိုလ်(ရည်ညွှန်းအပ်သော) (၇)ယောက် တို့ကို ပေါင်းတော့ ၁၂ ရတယ်။အဲဒီ့ ၁၂ ကိုမေတ္တာ(၄)ပါးနဲ့ ထပ်မြှောက်တော့ မူရင်းမေတ္တာ ၄၈ပါး ရတယ်။အဲဒါ့ကို အရပ်(၁၀)မျက်နှာနဲ့ထပ်မြှောက်တော့ ၄၈၀ ရတယ်။အဲဒါ့ကို မူရင်း မေတ္တာ ၄၈ပါးနဲ့ထပ်ပေါင်းတော့ ၅၂၈ မေတ္တာအပေါင်းရတယ်။ဒါကို ၅၂၈ အချစ်လို့ ခေါ်ဆိုနေကြတာဖြစ်တယ်။
သဗ္ဗေဘူတာ(ကံကိလေသာတို့မှ ဖြစ်ကုန်သော သတ္တ၀ါ)၊
သဗ္ဗောဝိနိပါတိကာ(ခပ် သိမ်းကုန်သော ၀ိနိပါတိကအသူရာတို့အား၎င်း)ကို ရည်ညွှန်းတာ ဖြစ်တယ်။
မေတ္တာလေးပါးကို အဝေရာဒိကမေတ္တာ(၄)ပါးလို့လည်း ခေါ်တယ်။ယင်းတို့မှာ
အဗျာပဇ္ဇာ ဟောန္တု(စိုးရိမ်မှုမရှိကြသည် ဖြစ်ပါစေသတည်း)၊
အနီဃာ ဟောန္တု(ဆင်းရဲခြင်း မရှိကြသည်ဖြစ်ပါစေသတည်း)၊
သုခီ အတ္တာနံ ပရိဟရန္တု(မိမိကိုယ်ကို ချမ်းသာမှုရအောင် ဆောင်ရွက်နြိုင်ကြပါစေသတည်း)
တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ဆို ၅၂၈ရှစ် မေတ္တာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အကျယ်သိလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
ကောင်လေးတွေ၊ကောင်မလေးတွေ ပါးစပ်ဖျားမှာ မချတမ်းပြောနေကြတဲ့ ၁၅၀၀အချစ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောပါသလဲ။ကျွန်တော် နည်းနည်းရှင်းပြချင်တယ်။ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားရဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကိုသိစေချင်တယ်။
၁။သဗ္ဗစိတ္တသာဓာရဏ စေတသိက် ၇ ပါး
၂။ပကိဏ်းစေတသိက် ၆ ပါး
၃။ပါပဇာတိစေတသိက် ၁၄ ပါး
၄။သောဘဏစေတိသိက် ၂၀ ပါး
၅။၀ီရတီစေတသိက် ၃ ပါး
၆။အပ္ပမညာစေတသိက် ၂ ပါး
စတဲ့ စေတသိက် ၅၂ပါးကို နာမ်တရား တပါးနဲ့ ပေါင်းတော့ ၅၃ ရတယ်။
အဲဒီ့ရတဲ့ ၅၃ ကို နာမ်တေပညာငါးဆယ်သုံးပါး လို့ ခေါ်တယ်။
အဲဒါ့ကို နိပ္ဖန္နရုပ်(ခေါ်)ဇာတိရုပ် ၁၈ ပါးနဲ့ ထပ်ပေါင်းတယ်။အဲဒီ့ထပ်ပေါင်းလို့ရလာတဲ့ ၇၁ ပါးကို
အဲဒါကို လက္ခဏာတရား ၄ ပါးနဲ့ ထပ်ပေါင်းတော့ ၇၅ ပါး ရတယ်။
ပြီးရင် အဲဒါကို အဇ္ဈတ္တ(အတွင်း)၊ဗဟိဒ္ဓ(အပြင်)သန္တာန်နှစ်ပါး နဲ့ မြှောက်လိုက်တော့ ၁၅၀ ရလာတယ်။
အဲဒါကိုမှ ကိလေသာ ၁၀ပါးနဲ့ထပ်မြှောက်လိုက်တော့ ကိလေသာတရားပေါင်း ၁၅၀၀ ဆိုတာ ထွက်လာတယ်။
အဲဒါကို အလွယ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နာမ်-နိ-လက်-ခံ။ဒွိသဏ္ဍာန်နှင့်မြှောက်၊ပြီးသော် ကိဆယ်ပါးနှင့်ပြန်ရောသော်
ရလာ ၁၅၀၀ ဆိုပြီး အလွယ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
အကျယ်ကတော့…သဗ္ဗစိတ္တသာဓာရဏ ဆိုတာ စိတ်အားလုံးနဲ့ဆက်ဆံတာကို ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သဗ္ဗစိတ္တသာဓာရဏ စေတသိက် ၇ ပါးကတော့
မနသိကာရ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ပကိဏ်း ဆိုတာ စိတ်အားလုံးနဲ့မဟုတ်ဘဲ တစ်ချို့စိတ်များနှင့်သာ ဆက်စပ်သော်ကြောင့် ပကိဏ်းလို့ ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ပကိဏ်း ၆ ပါးကတော့
ဆန္ဒ တို့ဖြစ်ပြီး အဲဒီ့နှစ်ခုပေါင်းကိုတော့ အညသမာန်းစေတသိက် ၁၃ပါးလို့ ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီနှစ်ခုဟာ အကောင်းရော၊အဆိုးရောနှစ်မျိုးလုံးနဲ့ ယှဉ်တွဲနေတာကြောင့် အညသမာန်းလို့ ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ့မှာမှ ဖဿမှာ ၆ပါး၊ဝေဒနာက ၆မျိုး၊သညာက ၆မျိုးနဲ့ ထပ်ခွဲထားတာတွေရှိပါသေးတယ်။
ပါပဇာတိစေတသိက် ၁၄ ပါးကိုတော့ အကုသိုလ်စေတသိက်လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီ့လိုခေါ်ရသလည်းဆိုရင် အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေအောင် လှုံဆော်ပေးလို့ အကုသိုလ်စေတသိက်တွေလို့ ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာတွေလည်းဆိုတော့
အဟိရိက (ကာယဒုစရိုက်မှ မရှက်ခြင်း)၊
ဒိဋ္ဌိ(မှားသော ရှု့မြင်ခြင်း၊နှလုံး သွင်းခြင်း)၊
ကုက္ကုစ္စ(လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒုစရိုက်၊မလုပ် လိုက်ရတဲ့ သုစရိုက်တို့ကို ပြန်ပြောင်းတွေးပြီး စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊နောင်တရခြင်း)၊
မိဒ္ခ(စေတသိက်၏ မတည်တံ့ မခိုင်မြဲခြင်း)၊
သောဘဏစေတိသိက် ၂၀ ပါး၊၀ီရတီစေတသိက် ၃ ပါး၊အပ္ပမညာစေတသိက် ၂ ပါးတို့အားလုံးပေါင်းကို ကလျာဏဇာတိ စေတသိက်လို့ ခေါ်တယ်။သောဘနစိတ်အားလုံးနဲ့ဆိုင်တာမို့ သောဘနသာဓာဂရဏလို့ ခေါ်တယ်။ဘာတွေလည်းဆိုတော့
သဒ္ဓါ(ဘုရားစတဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပေါ်မှာ စိတ်ကိုထားခြင်း)၊
စိတ္တဇုကတာ(စိတ်ဖြောင့်မတ်မှု) တို့ပဲ ဖြစ်တယ်။အဲဒီ့၂၀ကို ကလျာဏဇာတိစေတသိက်လို့လည်း ခေါ်တယ်။
(အဲဒီ့မှာ ဟီရိနှင့်သြတ္တပတရားအကျယ်ကို ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ ယခင်ပို့စ်တွေမှာ ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်။)
၀ိရတီဆိုတာ စောင့်ဆည်းခြင်း၊ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသဘောကို ပြောတာ ဖြစ်တယ်။၀ိရတီ ၃ပါးက
သမ္မာ အာဇီဝ(၀စီဒုစရိုက်၎ပါး၊ကာယဒုစရိုက်၃ပါးမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း)တို့ပဲ ဖြစ်တယ်။)
ဘယ်သတ္တ၀ါရယ်လို့ အမည်သတ်မှတ်ချက် မရှိတဲ့အထိ ကျယ်ပြန့်တာမို့ အပ္ပမညာ လို့ ခေါ်တယ်။ဘာတွေလည်းဆိုတော့ ကရုဏာ(ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုမြင်က သနားခြင်း)၊
မုဒိတာ(ချမ်းသာသောသူများကို မြင်က ၀မ်းမြောက်ခြင်း)တို့ပဲ ဖြစ်တယ်။
ဗြဟ္မစိုရ်တရား(၄) ပါးကိုလည်း အပ္ပမညာလို့လည်း ခေါ်တယ်။
အဲဒါတွေကို နာမ်တရားတစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီး နိပ္ဖန္နရုပ်(ခေါ်)ဇာတိရုပ် ၁၈ ပါးနဲ့ထပ်ပေါင်းတယ်။
အဲဒီ့ဇာတိရုပ် ၁၈ ပါးကတော့
အနောတ္တပ္ပ တို့ပဲ ဖြစ်ကြတယ်။
ဒီလောက်ဆို အကျယ်သိလောက်ပြီထင်ပါရဲ့။အကျယ်ကို ပြီးဆုံးအောင် ဖတ်တဲ့သူ ရှားမယ်ထင်ပါတယ်။
ရေးတဲ့သူတောင် လက်ညောင်းတာဆိုတော့…။ဖတ်တဲ့သူလည်း သေချာပေါက် မျက်စိညောင်းမယ်ဆိုတာ
လက်ခတ်မလွဲသေချာပါတယ်။ဒါပေမယ့် မြန်မာဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပြောတဲ့မြန်မာစကားရဲ့ အနက်အဓိပါယ်ကို
အတိအကျသိချင်လို့ပါ။နောက်ထပ်ဝန်ခံချက်တစ်ခုက စာဖတ်သူကို ဗုဒစာပေနဲ့ရင်းနှီးစေချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အော် တကယ်တော့……. ကျေးဇူးပါပဲဗျာ…………..
လူတိုင်းလူတိုင်း သုံးနေကြပြီး မသိတဲ့ စကားလုံးတွေ အများကြီးဗျ………..
အဲဒီထဲက နှစ်ခုကို အခုလို အပင်ပန်းခံပြီး ရှင်းပြပေးတာ…..ကျေးဇူးပါပဲ……….
အင်း မျက်စိတော့ တော်တော်ညောင်းသွားတယ် —
တော်ပါပေတယ် ကိုသွေးနက် ။ တကယ်ကို မသိခဲ့တဲ့ စကားလုံးတွေပါ ။ ကျေးဇူးပါပဲ။ ဆက်လက်အားပေး ဖတ်ရှု့နေပါဦးမယ်။
ပြောပြပေးတာ တော်တော်ကောင်းပါတယ်…ကျေးဇူးပါပဲ။ မျက်စိညောင်းပေမယ့် အစကနေ အဆုံးထိကို သေသေချာချာ ဖတ်လိုက်ပါတယ်…
နောက်ဆို ဒီထက် မျက်စိနောက်အုန်းမယ်။